717 Lake Bed N More: Moose Unit (Istudio esiphangaleleyo) - I-Airbnb
717 Lake Bed N More: Moose Unit (Istudio esiphangaleleyo)
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJosefina
Eli gumbi le-studio likwi-semi-basement yekhaya elihle le-1904 kwindlela yokuhamba echibini. Indawo esezantsi esezantsi iye yalungiswa ukuze ibonise indawo engasemva esemantla eMinnesota kwaye inokungena kwayo okwahlukileyo kunye nesitshixo sabucala. Eli gumbi liphangaleleyo lixhotyiswe ngendawo yokuhlala kunye nekhitshi. Kukho kwakhona ubungakanani obugcweleyo be-futon ukuhlalisa iqela labathathu. Igumbi lokuhlambela labucala lingaphaya kwegumbi lokuhlamba impahla.
Esi situdiyo siphangaleleyo sinendawo yokuba wonke umntu azolule. Indawo yokuhlala inesofa sokulala, isitulo sokuhlala kunye netafile yekofu. Ikhitshi lixhotyiswe isinki yasekhitshini, imicrowave, itoaster, ifriji encinci, imbiza yekofu kunye nesitshisi sombane xa uceliwe. Kukho i-dishwares kunye ne-silverwares kwikhabhathi yekhitshi, kunye netafile onokuthi utye okanye usebenze kuyo. Igumbi lokuhlambela labucala lingaphaya kwegumbi elisecaleni kwegumbi lokuhlamba impahla, lixhotyiswe ngezinto eziyimfuneko zeshawa kwaye ngokupheleleyo kuwe. Nangona ikwindlu yethu, ngaphandle kwengxolo ethile esuka kumgangatho ukuya kwisilingi, eli gumbi lesitudiyo livakala njengendawo kuwe. Eli lelinye lamagumbi amabini esiwaqeshileyo kwigumbi elingaphantsi. Ungabhukisha zombini kwiqela elikhulu.
4.67 · Izimvo eziyi-134
Indawo ezolileyo nebukekayo echibini ihamba ngezithuthi ezincinci. Ikumgangatho ophezulu kwaye ikhuseleke kakhulu, ibekwe ngaphandle nje kwe-Bemidji Ave./Highway 196. Uya kufumana ukuzola kwesi sitrato sisendleleni enye, kodwa kwakhona ukuphila kuba ziibhloko ezimbalwa ukusuka eDowntown Bemidji kunye neBemidji State University. Indlu yethu esecaleni kwechibi inika ukufikelela ngokulula kwiipaki ezintathu, iilwandle, iindawo zokutyela ezininzi, iivenkile ezithengisa ukutya, amathala eencwadi, iBemidji Tourist and Visitor Centre, kunye nemifanekiso eqingqiweyo engalibalekiyo kaPaul Bunyan kunye noBabe the Blue Ox, yenye yezona ndawo zityelelwa kakhulu eMinnesota.
Umbuki zindwendwe ngu- Josefina
Silusapho oluxakekileyo olunabantwana abancinci, ngoko ke asinakuhlala sikufutshane ukuze sikujonge ngaphakathi nangaphandle, kodwa siyathanda ukunxibelelana nanini na sinakho! Ubuncinci ngokuqinisekileyo siya kwenza iingcebiso zasekhaya, kwaye sihlala sikhona ukuphendula nayiphi na imibuzo ngokobuqu okanye ngeetekisi.
Silusapho oluxakekileyo olunabantwana abancinci, ngoko ke asinakuhlala sikufutshane ukuze sikujonge ngaphakathi nangaphandle, kodwa siyathanda ukunxibelelana nanini na sinakho! Ubu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bemidji